Ukunyuka kweVini | Martech Zone
NgeCawa, ngoFebruwari 16, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Vine Iphehlelelwe kunyaka ophelileyo kwaye ibe nempumelelo. Cinga ngoMdiliya njengenguqulo yevidiyo ye-Twitter, apho urekhoda khona iziqeshana ezimfutshane zevidiyo kwaye uzilayishe. Akumangalisi ukuba i-Twitter ithenge iVine kwaye idityaniswe idlala iividiyo ezivela kwi-Twitter kwaye kukho usetyenziso. Xa usebenzisa usetyenziso, ikhamera irekhoda kuphela ngelixa isikrini sichukunyiswa, sikuvumela ukuba wenze iividiyo ezintle.
Nantsi isampulu yendlela abathengisi abasebenzisa ngayo umdiliya:
Kunye ne-infographic, uTamba ubhale iposti kuyo Kutheni ukukhula kweVine kufanele kube nomdla kubathengisi. Babandakanya umthetho onomdla- ngokwe-Unrulymedia, iiVines ezinophawu lwamaxesha ziphindwe kane ukwabiwa kunamavidiyo aqhelekileyo. Ngaba uphawu lwakho luMdiliya okwangoku?
tags: urhweboIiVidiyo zeNtengisointengiso yomdiliyaumdiliya twitter
Intloko nje: Umbhalo awulungiswanga kakuhle. Akukho zithuba phakathi kwamagama.